Xujo-furka 'Qashin Uruurinta' ee baraha bulshada oo aad loo bogaadiyay - BBC News Somali
Inta badan ma dhacdo in oraah mid ah oo la iskula wadaago baraha xiriirka bulshada ay si wacan uga hir gasho meelo ka baxsan baraha bulshada.
Image caption Tobannaan kun oo ruux ayaa ka qeyb qaatay xujadan
Hase ahaatee, loollan lagu soo bandhigay internet-ka oo lagu dhiirri galinayo dadka ku jira baraha bulshada inay nadaafadda ka shaqeeyaan ayaa waxaa u hoggaansamay tobannaan kun oo ruux.
Oraahdan la isla wadaago oo dadku ay isku xujeysanayaan ayaa kusoo baxday luuqadda ingiriiska waxaana laga dhigay Trashtag Challenge, oo micnaheedu uu yahay loollanka qashin aruurinta.
Dadka loollankan xujada ah sameynaya ayaa marka hore sawir ku galaya goob uu qashin ka buuxo, iyagoo markaas ka dibna sawir iskaga soo qaadaya isla goobtii oo ay qashinkii ka nadiifiyeen.
Markaas kadib ayey ayey baraha bulshada asxaabtooda kula soo wadaagayaan iyagoo adeegsanaya sawirradii marka hore iyo kuwii dambe.
Dadka sida tabaruca ah xujadan u furaya ayaa nadiif ka dhigay meelo ay ka mid yihiin xeebaha u dhow badda, waddooyinka iyo goobaha lagu nasto.
Arrintan ayaa sidoo kale loo arkay wacyigalin dhammeystiran oo dadka ku dhiirri galineysa in ay qashinka ka nadiifiyaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo agagaarkoodaba.
Kooxdan oo ku sugan magaalada Novosibirsk ee dalka Ruushka, waxay sheegeen in ay aruuriyeen 223 bac oo qashin ah, kuwaasoo 75% ka mid ah qashinka caagagga ah ee ku jira dib loo soo warshadeyn doono.
Ka gudub Instagram daabacaad W.Q cleangames_nsk
Dhammaadka Instagram daabacaadda qore cleangames_nsk
Xuquuqda Sawirka cleangames_nsk cleangames_nsk
Xujadan ayaa lagu soo warramay in markii ugu horreysay la sameeyay sannadkii 2015-kii, xilligaasoo ay billowday shirkad lagu magacaabo UCO Gear, iyadoo ujeedadeedu ahayd inay dadka ku wacyi galiso nadiifinta dhulka keymaha ah.
Balse isbuucii lasoo dhaafay ayuu bog facebook ah soo dhigay farriin taas la mid ah oo mashruucaas dib u soo nooleysay.
Barta xiriirka bulshada ee Instagram-ka kaliya ayaa oraahdan qashin aruurinta lagu dhiirri galinayo la soo dhigay in ka badan 25,000 oo jeer, iyadoo dhammaan dadka soo dhigayayna ay ficil ahaan u sameeyeen qashin aruurinta.